स्वास्थ्य – Khabar Silo
भिजाएको काँचो चना नियमित खानुका यति धेरै अचम्मको फाइदाहरु, छक्क पर्नुहुनेछ ! जनिराखौँ । चनामा प्रशस्त मात्रामा फाइबर पाइन्छ, जुन पाचन प्रक्रियालाई बलियो बनाउन असाध्यै महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता छन् काँचो चना खानुका फाइदाहरु:- १) रातभर भिजाएको चनामा अदुवा, नुन र जिरा मिलाई बिहान खाने गर्नाले कब्जियतको स’मस्या क्रमशः कम हुँदै जान्छ । चना भिजाएको […]
Posted on November 27, 2021 Author khabar silo Comment(0)
काठमाडौं । अदुवा तरकारीलाई स्वादिलो बनाउन मात्रै होइन औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । अदुवा पानीमा हालेर उमालेर खाँदा विभिन्न रोग लाग्न दिँदैन भने लागेका केही रोग निको पार्न पनि मद्दत गर्छ । नियमित अदुवापानी पिउनाले शरीरको रगतमा सुगर लेभल नियन्त्रण गर्ने हुँदा डायबिटिज हुन दिँदैन । साथै रक्त सञ्चारमा सुधार ल्याउनेदेखि माशंपेशीमा आराम […]
Posted on November 23, 2021 Author khabar silo Comment(0)
टुसाएको गेडागुडी फाइदाकारी छ तर खानु अगाडी यति होस गरेमा मात्रै
टुसाएको गेडागुडी स्वास्थ्यकर हुन्छ । तर, यसको सरसफाईमा पर्याप्त ध्यान दिइएन भने यो हानिकारक साबित हुन्छ । किनभने, जब यो टुसाउन थाल्छ, साथसाथै ब्याक्टेरिया पनि पैदा गर्छ । हानिकारक ब्याक्टेरियाकै कारण अंकुराएको गेडागुडीले शरीरमा प्रतिकुल असर पार्न सक्छ । यसले के कस्ता समस्या निम्त्याउँछ त ? छालामा संक्रमण- अंकुराएको काँचो गेडागुडीमा साल्मोनेला नामक व्याक्टेरिया पैदा […]
Posted on November 18, 2021 Author khabar silo Comment(0)
यो चिसो समयमा हाई ब्लड प्रेसर भएको ब्यक्त्तीले के खाने ? के नखाने ?
हाई बीपी हृदय रोगको इशारा हुन सक्छ । डायटमा सैचुरेटिड फैट जस्तो कि मक्खन, घ्यू, तर आदि कम गर्नुस् । किनकी यसले मुटुको नली बन्द हुने खतरा बढ्छ । जति सकिन्छ, लो फैट डायट लिनुस् । – कैल्शियम, मैग्नीशियम र पोटैशियम आदि प्रचुर मात्रामा खानुस् । यो तत्व दूध, हरियो साग, सब्जीहरू, दाल, सुन्तला, स्ट्राबेरी, […]
Posted on November 17, 2021 Author khabar silo Comment(0)
न डाइटिंग न जिम जाने झन्झट जान्नुहोस् तौल घटाउने अनौठो चाइनिज ट्रिक्स
काठमाडौ । के तपाईंले तौल घटाउने यस्तो प्रविधिको बारेमा सुन्नु भएको छ जसमा औंलाले शरीरका केही भागलाई थि चे र तौल घटाउन सकिन्छ । यो प्रविधिलाई भावनात्मक स्वतन्त्रता प्रविधि भनिन्छ, जसमा शरीरका केही अंगहरूमा ट्यापिङ थेरापीलाई तौल घटाउन सहयोगी मानिन्छ। केही सञ्चारमाध्यमका अनुसार यो फर्मुला मार्फत धेरैले ५ महिनामा करिब ३० पाउण्ड अर्थात् साढे १३ […]
Posted on November 14, 2021 Author khabar silo Comment(0)
औषधीय गुण बोकेको सिस्नोका फाइदा
सिस्नोलाई तरकारीको रुपमा खाइने चलन छ । अझै पहाडी जिल्लाका दुर्गम स्थानमा सिस्नो र च्याँख्ला खानेलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने चलन छ । तर यही सिस्नोको औषधीय महत्वबारे तपाइँ जानकार नहुन सक्नुहुन्छ । प्रस्तुत छ सिस्नोका केही औषधीय महत्व- सिस्नोले मुटुसम्बन्धी समस्यालाई निको पार्नका लागि सहयोग गर्छ । यो मधुमेह रोगीका लागि पनि निकै उपयोगी हुन्छ […]
Posted on November 13, 2021 Author khabar silo Comment(0)
हामी सबैको एउटा नराम्रो साझा बानी हुन्छ, त्यो हो औंला पट्काउने। टि’बी हेर्दा, कुराकानी गर्दा, कुनै प्रस्तुति दिँदा, आतिँदा होस् या त थोरै फुर्सद होस् हामी औंला पट्काउन थाल्छौँ। औंलाहरू दुख्दा पनि हामी पट्काइहाल्छौँ। यसो गर्दा दुखाइ कम भएको म’हसुस पक्कै पनि हुन्छ। यदि तपा’ईंको पनि यस्तो नराम्रो बानी छ भने यसलाई आजै हटाउनुहोस्। किनभने […]
Posted on November 10, 2021 Author khabar silo Comment(0)
सुगर देखि हाडजोर्नीको दुखाइसम्मका लागि अमृत समान हुन्छ यो फूल !
हाम्रो वरिपरिका वनस्पतिबाट हाम्रा पूर्वजहरुले औषधि बनाउँथे र तिनै वनस्पतिको प्रयोगले नै निको पनि हुन्थे ।ती वनस्पतिहरुले कुनै नकारात्मक असर पनि नगर्ने हुनाले मानिसहरु स्वस्थ रहन्थे र उनीहरुको आयू पनि लामो हुने गर्थ्यो । हामीले प्रयोग गर्ने औषधि तिनै वनस्पति प्रयोग गरेर बनाइएका हुन्छन् , तर ती औषधिहरुमा रसायन पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ जसले गर्दा […]
नियमित हिँड्नु स्वस्थ जीवनशैलीको महत्वपूर्ण पाटो हो । बिहानको हिँडाइले त स्वास्थ्यलाई कैयौँ फाइदा पुर्‍याइरहेको हुन्छ । बिहान हिँड्दा दिनभर शरीर फुर्तिलो हुने मात्र नभई मोटोपन, मुटुरोगजस्ता कैयौँ समस्याबाट पनि बच्न सकिन्छ । विश्वमा भएका विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ कि नियमित हिँड्ने बानीले मानिसको आयुसमेत बढ्छ । यस्तो क्रियाकलापले शरीरको तौललाई पनि सन्तुलित गर्ने काम […]
Posted on November 8, 2021 November 8, 2021 Author khabar silo Comment(0)
काठमाडौं : पोषणको मामिलामा चना निकै सस्तो, सुलभ तथा उपयुक्त विकल्प हो । चनामा प्रोटिन, फाइबर, लवण तथा भिटामिनहरु प्र”शस्त मात्रामा पाइन्छ, जसले शरीरलाई स्व”स्थ राख्न म”द्धत गर्नुका साथै विभिन्न रोगहरुबाट पनि बचाउँदछ । उसो त चना हरेक उमेर तथा लिंगका मानिसहरुका लागि लाभायक हुन्छ । त्यसमा पनि पुरुषहरुका लागि हरेक दिन बिहान भिजेको चना […]
Posted on November 8, 2021 Author khabar silo Comment(0)